२७ मंसिर २०७६ शुक्रबार Friday, December 13, 2019
शनिबार बस्ने सचिवालय र आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेस गर्ने गरी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन तयार पारेका छन् । प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनिसकेको र यसमा आवश्यक परामर्श गरेर शुक्रबार अन्तिम रुप दिने दाहालको तयारी छ । पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका पाएपछि दाहालले पहिलो पटक लिखित प्रतिवेदन पेस गर्न थालेका हुन् ।
लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय यथावत राख्ने कि हटाउने भन्ने विषयमा सांसद र कर्मचारीहरूबीच विवाद भएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले शुक्रबार मुलुकभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका केही स्थानमा हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हिमपात हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ ।
आलिया एसियाकी सबैभन्दा कामुक महिला
बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्ट वर्ष सन् २०१९ को सबैभन्दा कामुक एसियाली महिलाका रुपमा चुनिएकी छन् ।
सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प
सिन्धुलपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर बिहीबार बेलुका भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार सिन्धुपाल्चोकको शर्माथाङ केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएको हो ।
बिदामा आएर साउदी नफर्के तीन वर्ष प्रतिबन्ध
साउदी अरबले बिदामा आएका कामदार भिसाको म्यादभित्रै नफर्के तीन वर्ष प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । साउदीको राहदानी विभाग (जवाजत) ले भिसा रद्द नगरी साउदी छाडेपछि पुनः सोही रोजगारदातासँग काम गर्न नआए तीन वर्षसम्म फर्कन नदिने निर्णय गरेको हो ।
मध्यवर्तीमा बाघ र हात्ती आतंक
एक महिनाअघि बाघको आक्रमणबाट ठाकुरबाबा नगरपालिका–१ डुम्रेनीस्थित ७० वर्षीया पहरिया थारूको मृत्यु भयो । घरनजिकै बंगुरलाई आहारा दिन गएका बेला उनलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो । त्यही समय आसपास बाघ आक्रमणबाट गेरुवा गाउँपालिका–४ को सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएकी स्थानीय रामकली शाहीको ज्यान गयो ।
हुम्लामा यो वर्ष बिहीबार दोस्रोपटक हिमपात भएको छ । हिमपातका कारण सुर्खेत र नेपालगन्जबाट सिमकोटमा कुनै पनि उडान भएनन् ।
सरकारले भारतीयले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरेको छ । भारतीय नागरिक जमालुदिन धुनियाले इलाका प्रशासन कार्यालय मझगवा रूपन्देहीबाट झूटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता लिएका थिए ।
उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुन नपाएकी सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–८ की ललितादेवी खंगलाई हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाका प्रमुख शैलेशकुमार साहले २५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा ढिलो पुगेको भन्दै सञ्चारकर्मीमाथि आक्रमण
पत्रकार सम्मेलनमा ढिलो पुगेको भन्दै एक समूहले नेपाल पत्रकार महासंघ सुनसरीका उपाध्यक्ष सन्तोष काफ्लेलाई बिहीबार दिउँसो सार्वजनिक स्थलमै मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको छ ।
लोकसेवा आयोग विधेयकका बुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'हराए'
लोकसेवा आयोगका कर्मचारीको सरुवा र आर्थिक स्वायत्तता सम्बन्धी आयोगले विधेयकमा गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले हटाइदिएको छ ।
यस्ता छन् देउवाले प्रस्ताव गरेका पार्टीका ४१ विभाग
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीका विभागको संख्या बढाएर ४१ पुर्‍याउने प्रस्ताव पेस गरेका छन् । देउवाले नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ३७ (१) (क) मा व्यवस्था गरिएका केन्द्रीय विभागहरुलाई परिमार्जन र पुर्नगठन गरी यसै विधानको धारा ३७ (२) ले गरेको केन्द्रीय विभागहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई विधानको धारा ५० (५) बमोजिम व्याख्या गरी विभाग थप्ने प्रस्ताव गरेका हुन ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने समय १० दिन
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनार्थ राजनीतिक दल दर्ता गर्न १० दिनको समय दिएको छ । राष्ट्रियसभाका १८ सदस्यको निर्वाचन ९ माघमा गर्ने निर्णय सरकारले गरेपछि आयोगले दल दर्ताको समय तोकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्का १९ निर्णय सार्वजनिक
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को १९ निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बाँस्कोटाले मंसिर २३ गते बसेको बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सरकारले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा पदक जित्ने खेलाडीलाई आकर्षक पुरस्कार प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पदक विजेता खेलाडीको सम्मानमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर ठूलो पुरस्कार घोषणा गरेका हुन् ।
गन्तव्यमा पुर्‍याउनै सकिएन पर्यटक
ठूलो लागतमा रिसोर्ट बनाइरहँदा फुङलिङ–२ मेवाखोला हिल रिसोर्टका सञ्चालक सुरेश लिम्बूलाई पाहुना आउँछन्, बस्छन्, खान्छन् र फाइदा पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो । अहिले होटलमा आएका पाहुनालाई घुमाउन कहाँ लैजाने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।
आमाभन्दा प्यारो सम्बन्ध अरू कोसँग होला ? अझ नवजात शिशु र बालबालिकाहरू त आमाबाहेक खासै अरूको काखमा जान समेत मान्दैनन् तर विराटनगरस्थित मानव सेवा आश्रममा उद्धार गरेर ल्याइएकी १० महिने शिशु सुम्निमालाई भोजपुर घर भएकी ३० वर्षीया शिवकुमारी राई चिन्दिनन् ।
जिल्लाको मादी नगरपालिका ५ को भवनमा अज्ञात समूहले आगजनी गरेका छन् । बुधबार राति आगलागीबाट कार्यालयका कागजपत्र, फर्निचर, कम्प्युटर, फोटोकपी, प्रिन्टर र मोबाइल फोनलगायत सामान जलेर नष्ट भएको मेयर विदुर सुब्बाले जानकारी दिए ।
किसानले उखु खेती घटाउँदै गएपछि बर्जु गाउँपालिकामा २ दशकदेखि सञ्चालन हुँदै आएको इस्टर्न सुगर मिल संकटमा परेको छ । २५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने क्षमताको यो मिललाई पछिल्लो समय चाहिएभन्दा आधा पनि उखु उपलब्ध हुन छाडेको छ ।
स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रका पर्यटकीयस्थल संरक्षण र प्रवर्द्धनमा चासो नदेखाउँदा ती क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको छ । १० वटै स्थानीय तहमा पुरातात्विक धार्मिक र पर्यटकीय महत्वका स्थल छन् । ती स्थलको प्रचार र संरक्षण नहुँदा ओझेलमा परेको स्थानीयले बताए ।
स्थानीय दक्ष कामदार अभाव भएपछि प्रदेश १ का पहाडी जिल्लामा निर्माण भइरहेका विकासे आयोजनामा भारतीय कामदार प्रयोग भइरहेको छ । कतिपय योजनामा पश्चिम नेपालका तराईका जिल्लाबाट पनि कामदार आएर काम गरिरहेका छन् ।
प्रदेश १ बाट थप
अहेबले गरेको ठगी अनुसन्धानमा
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका यहाँका एक अहेबले खोलेको क्लिनिक अवैध भएको खुलेको छ । सदरमुकाम गौरमा रहेको रवि डेन्टल क्लिनिक अवैध भएको पाइएको हो । अहेब भए पनि ‘एमडीएस डाक्टर’ बोर्डमा लेखेर बिरामी ठगेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
११ महिनामा २० को हत्या
सप्तरीमा पछिल्लो ११ महिनामा २० जनाको हत्या भएको छ । मानव अधिकार दिवसका अवसरमा राजविराजमा इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा हत्याका अधिकांश घटनाका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
अन्नभण्डारमै घट्यो धानको उत्पादन
अन्नभण्डार मधेसमा धानको उत्पादन बर्सेनि घट्दो छ । अत्यधिक विषादीको प्रयोगले माटोको उत्पादकत्वमा ह्रास आएसँगै उब्जनीमा कमी आएको हो । मौसमी असन्तुलन, एउटै जातको बालीको निरन्तरता र रोग–किराको प्रकोपले उत्पादन बर्सेनि घट्दै गएको छ ।
जनकपुर धेरैको रोजाइमा पर्दै
जनकपुरमा मंसिरमित्रै महत्त्वपूर्ण पाँच इभेन्ट (कार्यक्रम) सम्पन्न भएको छ । सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूमा भ्रमण वर्ष २०२० को प्रवर्द्धन कार्यक्रम, नेपाल लिटरेचल फेस्टिवल, काठमाडौं–सिन्धुली–जनकपुर साइकल राइडिङ, रामजानकी विवाह महोत्सव, वाउ मधेस उत्सव तथा साग खेलकुद प्रतियोगिता रहेका छन् ।
स्थानीय तहमा बेथिति : २६ महिना विरोधमै बित्यो
सिरहाका धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको विवादास्पद कार्यशैली र विकासका कार्यमा दलीय आधारमा भेदभाव गरेको भन्दै विरोधको क्रम तीव्र बनेको छ । धेरै स्थानीय तहमा विवादको चुरो ‘आर्थिक पारदर्शिता’ बनेको छ । जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिएको २६ महिना बितिसक्दा पनि विवाद जारी रहनुले स्थानीय निराश बनेका छन् ।
‘निजगढ विमानस्थल देशकै मेरुदण्ड’
बारास्थित प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशप्रति सरोकारवालाको चासो बढेको छ । वातावरण विनाश गरेर विमानस्थल बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्चमा गरिएको रिट दायरपछि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा विमानस्थलको काम यथास्थितिमा राख्न अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएपछि यसप्रति सरोकारवाला पक्षको चासो बढेको हो ।
प्रदेश २ बाट थप
भालुको आक्रमणबाट बिहीबार गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ टिमुरेका ७० वर्षीय दुब्ले तामाङ गम्भीर घाइते भएका छन् । गोठमा बसिरहेका उनलाई एक्कासि भालुले आक्रमण गरेको थियो ।
अपमानपछि घर फर्कनै गाह्रो
भिरालो जमिनमा अवस्थित घरको मूलढोकामा ताला झुन्डिएको छ । तिब्बती सिमानाको दुर्गम आलुम्पुसँग जोडिएको स्याखु बस्तीको यो घरमा ताला लागेको १७ दिन भयो । गाउँलेहरू अन्धविश्वासको भर पर्दा रत्नबहादुर श्रेष्ठ र कृष्णमाया दम्पती गाउँबाटै विस्थापित हुनुपर्‍यो ।
सीडीओसामु रोए वडाध्यक्ष
‘म जनताका लागि खटिरहेको छु, स्थानीय सरकार त भन्छन् तर मैले सरकारको अनुभूति जनतालाई गराउन सकिनँ । गाउँपालिकामा पुग्दा विपक्षीको व्यवहार गर्छन्, कुनै कुरा सुनुवाइ हुँदैन,’ रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष नुर्बु शेर्पा बुधबार भाषण गर्दागर्दै भक्कानिए । विकास निर्माणको अवस्था र नागरिकलाई परेको पिरमर्का बुझ्न उमाकुण्डको दुर्गम गाउँ गुम्देल पुगेकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी लीलाकुमारी पाण्डेसामु गुनासा राख्ने क्रममा उनी रोएपछि एकछिन् त्यहाँको माहोल नै अर्को बन्यो ।
प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनको बाटो खुल्यो
प्रदेश ३ सरकारले प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो गठनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा सुरु गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ब्युरो गठनका लागि ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेसँगै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माणको काम थालेको हो ।
डोजर दुर्घटनामा १ को मृत्यु, ३ घाइते
चरिकोट गौतमटोलबाट दोलखा बजारतर्फ जाँदै गरेको डोजर दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु भएको छ । ३ जना घाइते भएका छन् ।
मानव बेचविखन नियन्त्रणमा सबै लागौं : अध्यक्ष तामाङ
जिल्लाको पञ्चकन्या गाउँपालिकामा सोमबार समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गरिएको छ ।
प्रदेश ३ बाट थप
भूकम्पप्रतिरोधी इन्टरलक इँटा
कक्षा १२ पास गरेपछि बेंसीसहर नगरपालिका–७ सहजीका २८ वर्षीय सुमिन घलेले २ वर्षअघि कोरिया जाने सपना देखे । बेंसीसहरको एक सहकारीमा काम गर्दागर्दै उनी कोरियन भाषा पढ्न काठमाडौं गए । पासपोर्ट बनाए । एक वर्ष कोरियन भाषा पढे । परीक्षा पनि राम्रै दिए । तर, एकाएक उनको मन परिवर्तन भयो ।
गर्भवती लक्षित मोबाइल प्रविधि
स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकामा कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वंमसेविकाको मोवाइलमा गर्भवतीको अवस्थाबारे म्याजेज आउने गरेको छ । गर्भवती भएको ४, ६, ८ र ९ महिनामा म्यासेज आउने फेदीखोला गाउँपालिका प्रमुख घनश्याम सुवेदीले सुनाए ।
राजमार्गसँग जोडिन स्थानीय तहको लगानी
जैमिनी नगरपालिकाले कुश्मीसेरादेखि जैमिनीधामसम्मको सडक कालोपत्रे गर्न ठेक्का खुलाएको छ । दुई किमि लामो यो खण्डमा गत वर्ष नगरले ट्र्याक खोलेको थियो ।
होमस्टे अनुदानमा ‘अनियमितता’
ग्रामीण पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न घरबास कार्यक्रम (होमस्टे) प्रवर्द्धनको अनुदानमा अनियमितता भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । अघिल्लो वर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले वितरण गरेको १० लाख रुपैयाँबाट कुस्मा नगरपालिका–१४ आर्थरस्थित पञ्चकोसी होमस्टेका लागि खरिद गरेका सामग्री खुला आकाशमुनि कुहिन थालेका छन् । स्थानीयले सामान खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै स्पष्ट नभएसम्म जिम्मा नलिने भएका हुन् ।
चिसो बढेपछि स्कुल छुट्टी, पोहोरभन्दा यो वर्ष छिटो
चिसो बढ्न थालेपछि मनाङको मनाङ–ङिस्याङ र नार्पाभूमि गाउँपालिकाका सबै विद्यालय बन्द भएका छन् । शिक्षकका अनुसार यो वर्ष चिसो चाँडै बढ्न थालेपछि अभिभावकले छिटो बन्द गर्न आग्रह गरेका थिए ।
बागलुङको कुँडुलेमा निर्मित शालिग्राम संग्रहालय अवलोकनका लागि खुला गरिएको छ । ‘संसारकै एक मात्र संग्रहालय’ भएकाले धार्मिक पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्ने निर्माण समितिको दाबी छ ।
गण्डकी बाट थप
हिंसाविरुद्ध महिला सक्रिय
कुनै बेला घरायसी कुरा हो भनेर हिंसा सहेर बस्ने महिलाहरू अहिले आवाज उठाउन थालेका छन् । गाउँ, सहर सबैतिर महिलाहरू जागरुक भएका छन् । गाउँगाउँमा रहेका महिला समूहहरू पनि हिंसाविरुद्ध सक्रिय छन् । यसले हिंसा गर्न खोज्नेहरूलाई सचेत बनाएको छ ।
महबाटै लाख कमाइ
सिस्ने गाउँपालिका–३ पोखराका ओमप्रकाश खड्काले मंसिर महिनामा मात्रै २ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कमाए । सोही ठाउँका कमलाल खड्काको मंसिर महिनाको कमाइ २ लाख ३१ हजार रह्यो । त्यसै गरी मोतीराम खड्काले १ लाख १० हजार रुपैयाँ घर भित्र्याए ।
प्रदेश सरकारको ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढी’
प्रदेश ५ सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट निर्माण र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरोकारवालाले गुनासो गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनीहरूले बताए ।
अग्लो लेककको जन्तीलुङमा स्थानीयको अगुवाइमा होमस्टे (घरबास) सुरु भएको छ । मगर समुदायको बाहुल्य रहेको यस पर्यटकीय स्थलको संस्कृति बचाउन र प्रचार गर्न होमस्टे सुरु गरिएको हो ।
सहरीकरणसँगै जामको समस्या
जिल्लाभर सहरीकरण तीव्र छ । बसाइँसराइ बढेको बढ्यै छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा भएपछि यहाँ गाडीको संख्या ह्वात्तै बढेको हो । पूर्वपश्चिम र सिद्धार्थ राजमार्गको मिलनबिन्दु भएकाले दिनहुँ सयौं गाडी ओहोरदोहोर गर्छन् । तीव्र सहरीकरणसँगै अहिले ट्राफिक जाम बढेको छ । साँझ–बिहान बुटवल र भैरहवाका मुख्य चोकमा गाडी लाम लाग्छन् । मुख्य सडकको विकल्प नभएकाले जाम बढेको हो ।
प्रदेश ५ बाट थप
चितुवाको छाला र हड्डीसहित पक्राउ
चितुवाको छाला र हड्डीसहित चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–४, तिलुखानाका ६८ वर्षीय शिवबहादुर शाहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका योजना गुपचुपमै
कर्णाली प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका योजना गुपचुपमै सञ्चालन हुन थालेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय तहसँग समन्वय नगरिँदा बजेटको दुरुपयोग बढ्दै गएको छ ।
रित्तिए हिमाली बस्ती
नाम्खा र सिमकोट गाउँपालिकाका उच्च हिमाली बस्ती सुनसान बन्दै गएका छन् । अत्यधिक चिसो बढेपछि स्थानीयले गाउँ छोडेसँगै हिमाली बस्ती खाली बनेका हुन् ।
गाउँगाउँमा मदिरा नियन्त्रण अभियान
प्रहरीले गाउँगाउँमा अवैध मदिरा नियन्त्रण अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । मातहतका प्रहरी एकाइमार्फत अवैध घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट गर्न थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
दोस्रोपटक हिमपात हुँदा हुम्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । पश्चिमी वायु प्रणालीको प्रभावले हुम्लासहित कर्णालीका उच्च हिमाली क्षेत्रमा बिहीबार बिहान ६ बजेबाट हिमपात सुरु हुँदा अन्तरजिल्ला पुग्ने हवाई उडान बिहानबाटै प्रभावित भएको छ ।
‘कार्यक्रम बजारकेन्द्रित भए’
मुसीकोट नगरपालिकाले मंसिर ९ गते वडा १ को खलंगा बजारमा रहेको सहिद मैदानमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिन अभियानको पहिलो दिनको अवसर पारी उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न लैंगिक हिंसाविरुद्धका विभिन्न प्रस्तुति भए ।
कर्णाली बाट थप
धानको भाउ बढ्दा किसान खुसी
भीमदत्त नगरपालिका २, उल्टाखाममा विश्वेश्वरप्रसाद भट्टले झन्डै दशकपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साबिकको खाद्य संस्थान) मा धान बिक्री गरे । यसअघि ढिलो गरि काँटा लाग्ने र बजारको भन्दा कम मूल्य पाइने गर्दा उनले बजारमै बिक्री गर्दै आएका थिए । यसपटक बजारको भन्दा राम्रो मूल्य पाएपछि उनले लिमिटेडमै धान बिक्री गरेका हुन् ।
घोषणामै सीमित पर्यटकीय करिडोर
प्रदेश सरकारले पर्यटकीय करिडोर निर्माणका लागि गत आवमा छुट्टयाएको १७ करोड रुपैयाँ कार्यकर्ता र कुलदेवताका निजी मठ मन्दिर निर्माणमा खर्च गर्‍यो । चालु आवमा पनि धार्मिक पर्यटकीय करिडोर निर्माण गर्ने भन्दै विनियोजित १६ करोड रुपैयाँ गत वर्ष जस्तै मठ मन्दिरमा खर्च गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
व्यासमा छैन सुरक्षा पोस्ट
देशकै सर्वाधिक चर्चाको विषय बनिरहेको कालापानी र यहाँको व्यास क्षेत्र सुरक्षाविहीन अवस्थामा छ । सरकारले यस क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा पोस्ट राख्न तत्काल पहल गर्ने भने पनि सुरक्षा पोस्ट हालसम्म पनि स्थापना हुन सकेको छैन । व्यासमा रहेका नेपाल प्रहरीका दुई चौकीमा तैनाथ प्रहरीहरू चिसोमा बस्न नसक्ने भन्दै बेंसी झरेपछि व्यास क्षेत्र सुरक्षाविहीन हुन पुगेको हो ।
कृषिमा उत्पादन उत्साहजनक
यो वर्ष वर्षेबालीको उत्पादन ६ प्रतिशले बढेको छ । ६ सय ५३ हेक्टरमा लगाइएको गरिमा जातको धानमा बाला नलागेर २८ सय ९५ टन उत्पादन कम हुँदा–हुँदै पनि उत्पादन बढेको हो । अर्को प्रमुख खाद्य बाली मकैको उत्पादन पनि विगतको तुलनामा बढेको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यौन समस्या लुकाउँछन् महिला
वसन्तप्रताप सिंह, मेनुका ढुंगाना
अछामको ढकारी गाउँपालिका ४ कि ३२ वर्षीया नौमती (नाम परिवर्तन) लाई तल्लो पेट दुख्ने, पिठ्यूँ खसेजस्तै हुने, योनिबाट गन्ध आउने र पहेंलो पानी बग्ने, पिसाब फेर्न गाह्रो हुने समस्या छ । यो समस्या उनले न घर परिवारलाई भन्न सकेकी छन्, न त स्वास्थ्यकर्मीलाई नै ।
आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण झोलुंगे पुल
हिउँदको समय । पारिलो घाममा नाचगान गर्दै वनभोज खानुको मज्जै बेग्लै । महाकाली नदीमा निर्मित झोलुंगे पुल अवलोकन गर्न र वनभोज खान आउनेको संख्या दैनन्दिन बढिरहेको छ । हालका वर्षमा स्कुले बालबालिका र विभिन्न सहकारी संस्थाका लागि झोलुंगे पुल क्षेत्र वनभोजका लागि उपयुक्त स्थल बनेको छ ।
सुदूरपश्चिम बाट थप
प्रधानमन्त्रीले सागमा पदक जित्ने खेलाडीलाई यसरी गरे नगद पुरस्कार घोषणा
भिडियोमा हेर्नुहोस् सागको समापनमा ड्रोनले बनाए आकाशमै आकृति
किन आक्रोशित भए कोहलपुरका विद्यार्थी ?
हेर्नुहोस् अस्पतालबाट प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देश
मुगुमा यसरी जोतिन्छ एउटै गोरुले
दुवै अध्यक्षलाई कार्यकारी भएको फिलिङ आयो : नेकपा अध्यक्ष दाहाल
क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् किसान
दुई वर्षअघि बारा र पर्साका किसानले लगाएको मकै बालीमा दाना लागेन । उनीहरूले ड्रेगन, स्रेस्ता, सीपी ८३८ लगायत हाइब्रिड मकैको बीउ रोपेका थिए ।
सुरक्षा कोषमा जान राष्ट्र बैंकको ताकेता
कचौराको आवाजले तान्छ पर्यटक
श्रीराम सुगर मिल बन्द हुँदै
नेपालमै गाडी ‘एसेम्बल’ गर्न सम्झौता
धान बेच्न आएनन् किसान
सेनाले प्रधानसेनापति आमन्त्रित अन्तर्राष्ट्रिय महिला फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रतियोगिताको सातौँ संस्करण सेनाले यही मंसिर २९ गतेदेखि काठमाडौंमा आयोजना गर्न लागेको हो ।
अयाक्स समूह चरणबाटै बाहिर
डिफेन्डिङ च्याम्पियन लिभरपुलले मंगलबार राति साल्सबर्गविरुद्धको खेलमा आफूअनुकूल नतिजा निकालेको छ । यो नतिजाले टोलीले युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा स्थान निश्चित गर्‍यो । चेल्सीले पनि अर्को चरणमा आफ्नो स्थान सुरक्षित बनायो, तर अयाक्स भने स्तब्धपूर्ण रूपमा समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । समूहमा आफ्नो अन्तिम खेल खेलेपछि ६ टिमले नकआउट चरणमा प्रवेश पाए भने अयाक्ससँगै बाहिरिनेमा इन्टर मिलान पनि रह्यो ।
पीपीएल शनिबारदेखि [खेलतालिकासहित]
पोखरा प्रिमियर लिग (पीपीएल) को दोस्रो संस्करण शनिबारदेखि पोखरामा सुरु हुने भएको छ । पुस १२ सम्म चल्ने प्रतियोगितामा विराटनगर टाइटन्स, बुटवल ब्लास्टर्स, चितवन राइनोज, काठमाण्डू गोल्डेन्स, पोखरा पल्टन र एक्पर्ट धनगढी ब्लुजले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । शरद भेषावकरको कप्तानीमा रहेको पोखरा पल्टन साबिक विजेता हो । पहिलो संस्करणमा पोखराले चितवनलाई ४ विकेटले हराएर उपाधि जितेको थियो ।
युरोपेली च्याम्पियन्स लिग : अन्तिम १६ को समीकण पूरा
युरोपेली च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ मा पुग्न सफल टिमको समीकरण बुधबार राति पूरा भएको छ । समूह विजेताका रूपमा बार्सिलोना, बायर्न म्युनिख, युभेन्ट्स, लेपजिप, लिभरपुल, म्यानचेस्टर सिटी, पेरिस सेन्ट जर्मन र भ्यालेन्सिया नकआउट चरणमा पुगे ।
फाती बने च्याम्पियन्स लिगमा गोल गर्ने कान्छो खेलाडी
किशोर खेलाडी अन्सु फाती युरोपेली च्याम्पियन्स लिग इतिहासमा सबैभन्दा कम उमेरमा गोल गर्ने खेलाडी बनेका छन् । त्यसै गोलको मदतले मंगलबार राति बार्सिलोनाले इन्टर मिलानलाई २–१ ले हरायो । गोल गर्दा उनको उमेर १७ वर्ष ४० दिन छ । उनी स्पेनका खेलाडी हुन् ।
बेलायतको चुनावमा नेपाली समुदाय सक्रिय
बेलायतका राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्ता बिहीबार हुने आमनिर्वाचनमा आ–आफ्नो पक्षधरलाई विजयी गराउने अभियानमा जुटिरहेका छन् । ब्रेक्जिटले रुमल्लिएको बेलायतमा यो समयअगावै हुन लागेको दोस्रो चुनाव हो । निर्वाचनमा ‘हाउस अफ कमन्स’ को ६ सय ५० सिटका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।
नेपाली भूमी मिचिएको विरोधमा फ्रान्सस्थित भारतिय दूतावास आगाडि नेपालीको प्रदर्शन
दक्षिण कोरियामा एक हप्तामा तीन नेपालीको मृत्यु
चीनमा नेपालीले गरे रक्तदान
सिड्नीमा एक नेपालीको मृत्यु, हत्याको आशंकामा श्रीमती प्रहरी नियन्त्रणमा
ब्रिसबनमा “रातो र चन्द्रसूर्य...”
धर्म जनताका लागि अफिम हो । कार्ल मार्क्सको यो भनाइ चर्चित छ । एकपटक क्रिसमस पार्टीमा मार्क्स र एंगेल्स जिंगल बेल गाएर नाचिरहेका हुन्छन् । निर्देशकले मार्क्सलाई सोध्छन्, ‘यति बेला हाम्रा क्रान्तिकारी मित्रहरू के सोच्दै हुनुहुन्छ, तपाईंका बारेमा ?’
भारतीय सेनामा भर्ती भएकासँग मागी विवाह गरिदिने चलनै छ । विवाहपछि बाध्यताले पराइघर पुग्छिन् मादी–३ की विमा गुरुङ । दुई महिनाको बिदामा आएका उनका श्रीमान् पल्टन जाने बेला हुन्छ । उनी र सासुले गुरुङ संस्कारअनुसार खाँदा र चामलको टीका लगाएर बिदाइ गर्छन् । छुट्टी सकिएर गएको केही महिनापछि आँगन सफाइ गरिरहेको अवस्थामा हुलाकी आइपुग्छन् ।
खासगरी हिमाली जनजीवन र विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएका फिल्महरू प्रदर्शनीको विशेषता बोकेको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव (किम्फ) को १७ औं संस्करण बुधबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको छ ।
स्वस्तिमा खड्का, वर्षा राउत, सृष्टि श्रेष्ठ, साम्राज्ञी शाह र प्रियंका कार्की अहिलेका चलेका अभिनेत्रीमा पर्छन् । पछिल्ला वर्षहरुमा केकी अधिकारी र नम्रता श्रेष्ठसँगै यिनै अभिनेत्रीहरुको बोलबाला छ ।
पर्वतीय विषयवस्तुमा आधारित फिल्महरुको काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय फिल्म महोत्सव (किम्फ) १७ औं संस्करण बुधबारदेखि सुरु भएको छ ।
६ लेन सडकमा सौर्यबत्ती
सूर्यविनायक–तीनकुने ६ लेन सडकखण्डअन्तर्गत जडिबुटी मनोहरा पुलदेखि हनुमन्ते खोलासम्म सौर्यबत्ती जडान सुरु भएको छ । सडकको दायाँबायाँ करिब ५.५ किलोमिटर सडकमा बत्ती जोडिएको हो । मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको समन्वयमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा (पीपीपी मोडेल) अन्तर्गत बतास एसोसिएट्स प्रालिले बत्ती जडानको काम गरिरहेको छ ।
फुटपाथ कि पार्किङ
प्रशान्त माली, सीमा तामाङ
फोहोर छुट्याउने अभियान निष्प्रभावी
गर्भवतीलाई बिदा नदिँदा बढुवा रोक्का
माइतीघर– तीनकुने साइकल लेन
कित्ताकाटमा अदालतको आड
६ घण्टासम्म मुटुको चाल रोकिएपछि पनि बाँच्न सफल भइन् यी महिला
एक बेलायती महिलाको मुटुको चाल रोकिएको ६ घण्टापछि बाँच्न सफल भएकी छन्। उनी अहिले सकुशल छिन् ।
असममा हिंसा, अनिश्चितकालीन कर्फ्यू
भारतका दुवै संसदले पास गरेको नागरिकता संशोधन विधेयकको विरोधमा प्रदर्शनहरु बढेपछि उत्तरपूर्वी राज्य असमका केही सहरमा त्यहाँको सरकारले बुधबारदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू जारी गरेको छ । विधेयकको विरोधमा दसौं हजार मानिस सडकमा उत्रिएपछि यहाँ सेना परिचालन गरिएको छ ।
काठमाडौंमा चिनियाँ गायन
राजधानीमा चलिरहेको चिनियाँ गायन प्रतियोगिता अन्तर्गत बुधबार साँझ सेमिफाइनल अन्तर्गत उत्कृष्ट १० प्रतिभा छनोट भएका छन्। नेपाल चीन सांस्कृतिक आदान प्रदानमा टेवा पुर्‍याउने ध्येयले सञ्चालित गायन स्पर्धामा कुल ३२६ जनाबाट छानिँदै दश प्रतिस्पर्धीले ‘टप टेन’को यात्रा तय गरेका हुन्।
रोहिंग्याविरुद्ध नरसंहार भएको छैन : सुची
म्यान्मारकी नेतृ आङ सान सुचीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) मा मुलुकविरुद्ध लागेको नरसंहार आरोपको खण्डन गरेकी छन् । उनी आफ्नो मुलुकको बचाउ पक्ष उभिएकी छन् ।
विवादास्पद नागरिकता विधेयक पारित
चर्को विवादका बीच नागरिकता संशोधन विधेयक (क्याब) भारतको दुवै सदनबाट पारित भएको छ । बुधबार दिनभरको छलफलपछि विधेयकलाई माथिल्लो सदन राज्यसभाले बहुमतका आधारमा पारित गरेको हो ।
पूर्वअर्थमन्त्री महतको पुस्तक सार्वजनिक
पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतद्वारा लिखित समसामयिक नेपाली अर्थतन्त्रसम्बन्धी पुस्तक बुधबार सार्वजनिक भएको छ । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले पुस्तकको विमोचन गरेका हुन् । ‘ट्रयल्स, ट्रेमर एन्ड होप’ नाम दिइएको पुस्तक भारतको नयाँदिल्लीस्थित एड्रोइट पब्लिसर्सले प्रकाशन गरेको हो ।
जोशीलाई पृथ्वी प्रज्ञा
शुक्रबारदेखि पोखरा साहित्यमय
शुक्रबारदेखि पोखरा साहित्यमय बन्ने
कान्तिपुरकर्मी यज्ञश पुरस्कृत
बान्तावा कविता प्रतियोगितामा ‘आन खिम टेन’ उत्कृष्ट
क्रिकेटमा फ्यान्टासी : खेल र खेलाडीलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर
सुन्दर पर्यटकीय नगरी पोखरामा यही मंसिर २८ गते देखि पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करण सुरु हुँदै छ । ६ टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिताले नेपाली घरेलु क्रिकेटलाई दर्शकमाझ अझै लोकप्रिय बनाउने, क्रिकेट खेललाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गराउने तथा युवा खेलाडीलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पनि प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बेलायतमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समस्या
बेलायतमा चर्चित सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र फोटो सेयरिङ एप इन्स्टाग्राम डाउन भएका छन् ।
भारतीय बजार खोज्दै हुवावे
अमेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई ‘५-जी’ उपकरण बेच्न प्रतिबन्ध लागेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवावेले भारतमा आक्रामक बजार विस्तारमा सक्रिय देखिएको छ ।
अमेरिकी दबाबका बाबजुद हुवावेको आम्दानीमा २४ प्रतिशत वृद्धि
चिनियाँ प्रविधि कम्पनी हुवावेको आम्दानीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
आफूले प्रस्ताव गरेका विषयमा अनुसन्धानका लागि दुईजना नेपाली महिला वैज्ञानिकहरुले जनही ५०/५० हजार डलरको फेलोसिप पाएका छन् । युनेस्को अन्तर्गतको संस्था अर्गनाइजेसन फर वुमेन इन साइन्स फर द डेभ्लोपिङ वर्ल्ड (ओडब्लूएसडी)ले डा. टिस्टा प्रसाई जोशी र डा. प्रतिभा पाण्डेलाई उक्त रकमको अनुसन्धानवृत्ति दिएको हो ।
निःशुल्क प्याड वितरण कार्यक्रम, घोषणाको ३ महिना बित्दा पनि अन्यौल
यो वर्ष भदौदेखि सामुदायिक विद्यालयका झण्डै १६ लाख छात्रालाई महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी विद्यालयका कक्षा ६ देखि १० कक्षासम्म पढ्ने छात्राहरुलाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
जीवनका हरेक पल कैद गर्ने एक वैज्ञानिकको जमर्को
कोहलपुर घटना : जसलाई खुट्टा गुमेको थाहा छैन
मखमली र गोदावरीको पर्व
तिहार विशेष : धनका सय बाटा
सिस्नु लगाउने देउसी
उधौलीको रमझममा किराँतीहरु (तस्बिरहरु)
काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका विभिन्न जिल्लाका किराँत समुदायले उधौली पर्व धुमधामका साथ मनाएका छन् । किराँत समुदायकले ललितपुरको सुनाकोठीमा भेला भएर उधौली पर्व मनाए । नयाँ अन्नबाली पाकेपछि पितृपूजा गर्दै हरेक वर्ष मंसिर पूणिर्मा तिथिबाट यो चाड मनाउन सुरु गरिन्छ । धान, कोदो, अदुवालगायतका बालीलाई घर-घरमा पितृको नाममा चढाउने र सार्वजनिक स्थलमा भेला भएर प्रकृतिलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै नाच प्रदर्शन गर्दछन् ।
२७ तस्बिरमा साग
नेपालले १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) सफलतापूर्वक आयोजना गरेको छ । यसपटक सागमा २७ खेल समावेश थिए। घरेलु मैदानको फाइदा उठाउँदै नेपालले ५१ स्वर्णको कीर्तिमान बनायाे । ६० रजत र ९५ कास्यसहित नेपालले कूद्य २०६ पदक जित्यो । साग इतिहासमै यो नेपालले हात पारेको सबभन्दा ठूलो जित हो । नेपालका लागि गौरिका सिंहले एउटै संस्करणमा सार्वाधिक ४ स्वर्ण जितिन् । कान्तिपुरका फोटो पत्रकारहरुले खिचेका २७ तस्बिरमा उद्‌घाटनदेखि समापनसम्म साग यस्तो देखियो:
नेपाल चौथो पटक साग फुटबलमा च्याम्पियन बनेपछि‍‍‍ रंगशालामा देखिएका दृश्यहरु
अ‌ंगद ढकाल, तस्बिर : इलिट जोशी
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत मंगलबार भएको पुरुष फुटबलमा भुटानलाई २-१ गोल अन्तरले हराउँदै नेपाल चौथो पटक साग च्याम्पियन बनेको छ । याे जितसँगै नेपालले सागमा ५१ वटा स्वर्ण जितेको छ । साग च्याम्पियन बनेपछि‍‍‍ दशरथ रंगशालामा देखिएका दृश्यहरु यस्ता छन् । हेर्नुहोस् तस्बिरहरु :
यसरी खेले सांसदले फुटबल [तस्बिरहरु]
संसद् दिवसको अवसरमा मंगलबार सांसदहरुले सचिवालयका कर्मचारीहरुसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा कर्मचारीहरुकाे टीमले सांसदहरुकाे टीमलाई ४ गोल ठाेक्यो । जवाफमा सा‌ंसदहरुकाे टीमले एक गाेल पनि फर्काउन सकेन । सांसद टीमको नेतृत्व राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गरेका थिए भने कर्मचारीको नेतृत्व संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले गरेका थिए । सांसदको टिम हारे पनि खेल रोचक बनेको थियो । संसद् दिवस यही मंसिर २८ गते मनाइँदै छ । हेर्नुहोस् तस्बिरहरु
सागको नवौं दिन तस्बिरमा हेर्नुहोस् 'गोल्डेन गर्ल' गौरिकालाई
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) अन्तर्गत पौडी प्रतिस्पर्धाको पाँचौ दिन सोमबार १ सय मिटर फ्रि–स्टाइलमा १७ वर्षीया गौरिकाले स्वर्ण हात पारेसँगै दक्षिण एसियाली खेलकुदको एकै संस्करणमा ४ स्वर्ण प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी बनेकी छन् । तर विभिन्न संस्करणमा गरी ४ स्वर्ण जित्ने तेक्वान्दो खेलाडी दीपक विष्ट पनि हुन् ।
प्याजको सिरानी !
प्याज काट्दा रून्थे मान्छे  । अब प्याजलाई भान्सामा भित्र्याउँदा रूनुपर्ने दिन आयो  ।
भारतमा तीन वर्षअघि सम्पन्न १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) वीरबहादुर महराको अन्तर्राष्ट्रिय डेब्यु थियो  । तैपनि उनले राम्रो गर्ने आशा थियो  ।
प्रविधि विवादका कुरा
पातले र पातलीको लोभ
धान लहलह झुलेको थियो । पाकेको धान भित्र्याउन किसानले खेताला पनि खोजिसकेका थिए । धान झुलेर सुनौलो देखिए पनि किसान बस्तीबाट अलि टाढा भएकाले टालाटुली खेतमा मुसा, बाँदर ...
Your browser is too old or not supported by Kantipur Daily.
You are recommended to upgrade to latest version of